အချစ်ဆီ ခြေလှမ်း ..လက်တစ်ကမ်းတောင် မဝေးနေချင်ဘူး။
Posted by ဇနိ at 5:37 AM Links to this post 1 comments
‘’ငါတို့ရွာရဲ့မြို့ရိုးဟောင်းကြီးပေါ်ကိုထိုင်ပြီး ကျွန်းထဲမှာစိုက်ထားတဲ့ စိုက်ခင်းတွေကျွန်း ရွာတွေကိုကြည့်ရတဲ့အရသာကြောင့် အီဗယ်မျှော်စင်ကို..စိတ်မ၀င်စားသလို.လတ်ဆတ်တဲ့တော ပန်းရနံ့ကိုလည်း ရှယ်နယ်နံပါတ် 5..ရေမွှေးနဲ့ မလဲနိုင်တာအမှန်ပဲ ‘အိမ်ရှေ့တဲဆီမှ ကျယ်လောင်စွာ အော်ပြောနေသော စိန်ကြီး၏ အသံသည် အိမ်ပေါ်မှ စုကြားအောင်တမင်ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ အာလူး…. စုသည်စိတ်ထဲမှ ရေရွတ်လိုက်ပြီး ဓာတ်စက်နားထောင်မလို့ ဓာတ်ပြားတွေဖုန်သုတ်နေရာမှ ရပ်လိုက်သည်။ ဒီတစ်ချပ်ဆိုရင် စိုးမိုးမေတ္တာနားထောင်လို့ရပြီ။ ဒါပေမဲ့ဖုန်သုတ်ရတာလက်ညောင်း၍ ဓာတ်စက်ကိုလည်း လှည့်နိုင်မည်မထင်တော့။ ပြီးတော့…စုသည်ဓာတ်ပြားတွေကိုထားခဲ့ပြီး ဘုရားခန်းသို့ဝင်လိုက်သည်။ နမောတဿ အစချီကာ ဓမ္မစင်္ကြာဖြင့် ကျယ်ကျယ်လေးဘုရားကန်တော့သည်။’ သူတော်ကောင်း သူမြတ်လောင်းတို့ ပို့သသောမေတ္တာ ပေးဝေငှသောကုသိုလ်အဖို့ဘာဂကို အကျွန်ုပ်ကလည်း ကောင်းစွာခံယူ၍ သာဓုအနုမောဓနာခေါ်ဆိုပါ၏ သာဓုသာဓုသာဓ’ု’ အမျှဝေပြီးသာဓုခေါ်သည်။ ကြေးစည်လေးကိုရိုက်ပြီးနောက် အိမ်ပေါ်မှအိနြေ္ဒဖြင့် ဆင်းလာခဲ့၏။ ဟင်း…ဘယ်ရမလဲ စုပဲ။
‘’စုကြီးပြန်ရောက်နေပြီကိုး။အိမ်ပေါ်တက်ပြီးဘာလုပ်နေတာတုန်း’’သိရက်သားနှင့်မေးသောကျော်ကြီးကိုစုမျက်စောင်းထိုးလိုက်ရင်း’’ဓမ္မစင်္ကြာရွတ်နေတာပေါ့ ။တရားဦးဓမ္မစင်္ကြာ ၊နင်တို့ အလွတ်မရဘူးမို့ လား ငါကအလွတ်ဆိုတာ ‘’ ဟုဂုဏ်လုပ်ကာပြောလိုက်သည်။(သူတို့က ဓဇဂ္ဂသုတ်တောင်မရသူတွေ)။
‘’နေပါဦး နင်က ဓမ္မစင်္ကြာတော့ရွတ်တာဟုတ်ပါပြီ၊ ဓရှည်စင်္ကြာရောအလွတ်ရလို့လား’’‘’ဟင်း ဘုရားကိုနော် နင်ငရဲကြီးလိမ့်မယ်။ တွေ့တွေ့ခြင်းနင်တို့နဲ့ရန်မဖြစ်ချင်ဘူးဟာ’’
‘’သြော ရန်ဆိုမှသတိရတယ် လူဆိုတာခြွေမှရံတာ နင်ပါလာတဲ့မုန့်တို့ကိုကျွေးဦးလေ။ ဒါမှဒို့ကိုနင့်အခြွေအရံလို့ သတ်မှတ်နိုင်မှာနော်’’ သူတို့သည် မုန့်စားချင်တိုင်း စုကိုမြှောက်ပြောလေသည်။ စုသည် ကြောင်အိမ်ထဲမှမုန့်ထုပ်ကိုသွားယူပြီး ကျွေးလိုက်ရသည်။
မုန့်စားရင်း သူတို့ခေါင်းစဉ်က ရွာအကြောင်းပြောင်းသွားသည်။ တစ်နှစ်လျင် ရွာနှင့် ကိုးလလောက် ခွဲခွာနေရသော စုသည် ရွာကြောင်းရပ်ကြောင်းများကို တမေ့တမောနားထောင်တတ်သည်။ သူတို့က ဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းကိုပြောလျင်လည်း ရယ်စရာနှင့်ဇာတ်သိမ်းသည်။ ရင်နာစရာအကြောင်းကို ပြောလျင်လည်း ရယ်စရာနှင့်နိဂုံးချုပ်သည်။ ရယ်စရာအကြောင်းကိုပြောလျင်တော့ရယ် စရာနှင့်ဇာတ်မသိမ်းပဲ တမင်ကြေကွဲအောင် လုပ်ကြံဖန်တီးပြောကြပြန်သည်။
‘’ဒါနဲ့ စကားမစပ် နင်မြို့မှာကျောင်းသွားတက်တာ မဝေလွင်လိုလဲလှမလာဘူး’’ မုန့်ကုန်ကာနီးတော့ သူတို့က ဖောက်လာသည်။’’မလှရင်လဲ ဘာဖြစ်လဲ’’ စုသည် စကားလုံးကြီးကြီးဖြင့်ပြန်ပြောချင်သော်လည်း ရုတ်တရက်စဉ်းစားမရတော့ မပြောနိုင်ပေ။
‘’စကားလက်အိုဟာရာနဲ့ မတူတာပေါ့ ဟ’’
ဤသို့စာာသံပေသံစကားလုံးများကို ရွေးချယ်သုံးနှုန်းတတ်သော၊ စကားပြောရာတွင် လှတောသား၏ အဘိုးဟုယူဆနိုင်သော၊ စာဖတ်ကျူးသည့် အထူးများ (အရူးများဟုမဆိုပါ) သည်စု၏ငယ်သူငယ်ချင်း များဖြစ်ပါသည်။ အမည်ရင်း စိန်နိုင် ကျော်နိုင် ကိုသူတို့ ဘာသာအပြန်အလှန်စိန်ကြီး ကျောက်ကြီးဖြစ်သွားပြီး စုသည်လည်းသူတို့ ပါးစပ်ဖျားတွင်အလိုလို စုကြီးဖြစ်သွားသည်။ စုမေမေသည် စာသင်ကျောင်းမရှိပဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းသာရှိသောရွာတစ်ရွာတွင် အစိုးရကျောင်းစဖွင့်ခဲ့ရာမှ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် စာတော်သော စိန်ကြီးကျောက်ကြီးတို့သည် လေးတန်းမှစတက်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ထိုမှစ၍ စုနှင့်အတန်းတူဖြစ်သွားပြီး စာပြိုင်ဘက်တွေလဲဖြစ်သည်။ အလယ်တန်း အထက်တန်းရာက်တော့ စုကအဖိုးအဖွားများရှိသောမြို့မှာ ကျောင်းသွားတက်သည်။ သူတို့က အထက်တန်းကျောင်းရှိသော စုတို့ရွာတွင်ကျောင်းတက်ခါ တစ်ပတ်လျင် စနေ၊တနင်္ဂနွေနှစ်ရက်သာ သူတို့ရွာပြန်၍ စုတို့အိမ်မှာပင်နေသည်။ မေမေသည် သူ့ချစ်တပည့်များကို.စာအုပ်စဉ် အပိုင်ပေးထားဟန်ရှိသည်။ စာအုပ်တွေထဲမှ စကားလုံး ကြီးကြီးများကို (စုရှေ့ဆိုလျင်ပိုပြီး) ပြောတတ်ကြသည်။ စုကလည်းသူတို့ကိုအရှုံးပေးလေ့မရှိပါ။ ရွာမှာမရှိသော နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာထဲမှ အကြောင်းအရာများကိုတဖွဲ့တနွဲ့ပြောပြလိုက်သည်။ (ဒီတော့သူတို့ထက် uptodate ဖြစ်သွားရောမဟုတ်လား)
‘’စုကြီး နင်ဦးသြကျောင်းကိုသွားလိုက်ဦးနော်၊ ဆယ်တန်းဖြေရက်နောက်ကျတာမသိတော့ ဦးသြနင့်ကို ခဏခဏမေးနေတယ်၊ မနက်ဖန်သွားမလား၊ ဘယ်အချိန်လောက်သွားမလဲ’’
‘’အင်း မနက်ဖန်သွားမယ်လေ ဆွမ်းမစားခင်အချိန်လောက်ပေါ့ အဘွားတို့လှူလိုက်တာတွေ သွားကပ်ရင်းနဲ့ ’’
ဦးသြသည် စုတို့ကိုးကွယ်သော ဘုန်းဘုန်းကြီးဖြစ်သည်။ သူတို့ကကွယ်ရာတွင် ဦးသြ ဟုခေါ် ကြသည်။ ရှေ့ဆိုလျင်တော့ နားရွက်မခတ်ရဲအောင်ကြောက်ဒူးတုန်နေပြီ။
‘’ငါတို့တွေမနေ့ ကမှပြန်လာတာ။လက်ပံပင်ကြီးအောက်ရောက်တော့ နင့်ကိုသတိရနေကြတယ်
လက်ပံလဲဖူး စုကြီးလဲ……ပြန်မလာသေးဘူးလို့ ပါ’’
စုသည်လက်သီးပြလိုက်ပြီး’’လက်ပံပွင့်တွေကြွေနေပြီမို့လား မနက်ဖန်ကျရင် လက်ပံပွင့်လဲကောက်ခဲ့မယ်’’
‘’လက်ပံပွင့်ပဲကောက်မလား လက်ပံပင်ကြီးပဲပတ်ပြေးမလား ဟား ဟား ဟား’’
ကျောက်ကြီးကစုကိုနှိပ်ကွပ်လိုက်သည်။ စုသည်အရင်နှစ်တွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းတက်ခဲ့ရသည်။
နွေကျောင်းပိတ်လျင် မေမေ့အစီအစဉ်အရ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်စာတက်ရသည်။ ယဉ်ကျေးမှုမြန်မာ၊ အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲများဖြေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျောက်ကြီး၊ စိန်ကြီး၊ စုနှင့်မောင်လေးသာ အပြင်ကလာတက်သူတွေဖြစ်၍ ကျန်စာသင်သားများမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားများသာဖြစ်သည်။ စုသည် ဘုန်းကြီးကျောင်းတက်ရသည်ကို အလွန်ပျော်သည်။ ’’အလဿသကုတောသိပ္ပ အသိပ္ပဿကုတောဓနံ’’ ဘုန်းဘုန်းကြီးကချပေးပြီး စုကလိုက်ဆိုတော့ ထစ်အထစ်အ။ ဘုန်းဘုန်းက’’ နာနာရွတ် နာနာအံ’’ဟုမိန့်သည်ကိုလည်း စုကရယ်ချင်သေးသည်။ စုအပျော်ဆုံးနေ့မှာ နေ့ခင်းသုံးနာရီလောက်တွင် ဘုန်းဘုန်း၏ ‘’သျှန်….ရေး’’ ဟူသော အသံကြားရသည့်နေ့ ဖြစ်သည်။ ‘’တင်ပါ့ ဘုရား’’ဟု ကိုရင်ငသျှန်ပြန်လျှောက်လိုက်ပြီဆိုလျင် စုသည် အပျော်မျက်နှာကို မနည်းပဲထိန်းသိမ်းနေရသည်။ ‘’သျှန်ရေး’’ ဟူသော တိုတိုတုတ်တုတ် ဘုန်းဘုန်းအသံမှာ ဆွမ်းဟင်းကျန်များကို စုပေါင်းပြီး သရက်သီးခြောက်၊ ဗူးသီးခြောက်တို့နှင့် ဟင်းလေးချက်ရန် ကိုရင်ငသျှန်ကိ်ုတာဝန်ပေးသံဖြစ်သည်။ မကြာခင် စုတို့ဟင်းလေးချက်နှင့် ထမင်းစားရတော့မည်ဖြစ်သည်။ စားဖူးသမျှဟင်းများတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှဟင်းလေးချက်သည် စုအမက်ဆုံးဟင်းဖြစ်သည်။
မေမေက စုညနေစာကောင်းကောင်းမစားလျင် ‘’ဘုန်းကြီးကျောင်းကစားလာပြန်ပြီလား။ သမီးရယ် အဲဒါ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးတွေစားဖို့ ချက်တာ သူတို့၀၀လင်လင်စားပါစေ။ နောက်တစ်ခါမစားခဲ့နဲ့ မေမေမကြိုက်ဘူး’’ ဒီလိုနေ့ တွင်စုသည် မေမေနှင့်အခက်ကြုံရသည်။ ကျောင်းမှာလည်းစားရအောင် အိမ်မှာလည်း မေမေမရိပ်မိအောင် သူတို့နှစ်ယောက်ကအကြံပေးသည်။ စုတို့ရွာနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းကြား လမ်းတွင် လက်ပံပင်အကြီးကြီးတစ်ပင်ရှိသည်။ ကျောင်းမှ ထမင်းစားခဲ့သောနေ့ဆိုလျင် အိမ်ကိုတန်းမပြန်ကြပဲ၊ စုက ထိုလက်ပံပင်ကြီးကိုပတ်ပြေးရသည်။ သူတို့ကထိုင်စောင့်နေကြသည်။ ပင်ပန်းပြီး ဗိုက်ချောင်လာမှအိမ်ပြန်ကြသည်။ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကို သူတို့ကိုယ်တိုင်အကြံပေးပြီး အခွင့်သင့်တိုင်း စုကိုနှိပ်ကွပ်တတ်သော သူငယ်ချင်းကောင်းများဖြစ်သည်။ တစ်ခါတလေညောင်း၍ ’’ငါမပြေးချင်ဘူးဟာ’ ပြောလျင်’’မပြေးချင်ရင်မစားပဲနေပါ့လား၊ ဆရာမကြီးဆူရင်တော့ဒို့လဲမတတ်နိုင်ဘူး၊ အမှန်အတိုင်းတင်ပြရမှာပဲ’’ ဟုအကြပ်ကိုင်ကြသေးသည်။
စုသည် RIT တက်နေသည့် အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်က်ို သံယောဇဉ်တွေပိုကာ စာတွေအပြန်အလှန်ရေးမိသည်။ စာကို ရွာက စာတိုက်ပုံးမှာမထည့်ပဲ စိန်ကြီးနှင့်ကျောက်ကြီးကို စက်ဘီးနှင့် စာတိုက်ရှိသည့်မြိုလေးသို့ သွား၍ထည့်ခိုင်းသည်။ ကဲသောစုက တစ်ပတ်လျင်နှစ်ခါလောက်စာထည့်ခိုင်းတော့လည်း သူတို့ ကမငြိုငြင်ကြပါ။
ဒါပေမဲ့ ညလသာသာမှာ ဂစ်တာတီးရင် မောင့်အရိုင်းပန်းသီချင်းကိုဆို၍ ‘’ကံဇာတာကြွေချိန်လား ၀ဋ္ဋ်ကြွေးတွေမကုန်လို့ လား ရေတိမ်မှာ နစ် မွန်းရပြီ’’ ဟုစုကိုစောင်းမြောင်းလေသည်။ စုကတော့ ရေတိမ်နစ်ချင်တာတောင် ရေနဲ့ ဝေးတဲ့ ကန္တာရထဲရောက်နေသည့်ကိုယ့်အဖြစ်ကို လျို့ ဝှက်ထားရသည်။
ဒါကို သူတို့ သိရင်လက်ပံပင်ကြီးကိုပဲပတ်ပြေးခိုင်းဦးမလား…စိုးရိမ်ရသည်။
နှစ်တွေရှည်ကြာပြီဖြစ်၍ ယခုအခါစိန်ကြီးသည် ဒေါက်တာဘွဲ့ ယူရန်ကြိုးစားနေသည့် တက္ကသိုလ်မှ လက်ထောက်ကထိက။ ပညာလဲစုံကြင်ယာလဲစုံ သားလေးတစ်ယောက်ရနေပြီ။ ရှေ့ နေလုပ်ချင်လွန်း၍ ဥပဒေအထူးပြုယူခဲ့ရာမှ မာစတာဝင်ပြီးတက္ကသိုလ်ဆရာဖြစ်သွားသည်။
ရှေ့ နေဖြစ်ချင်သော စိန်ကြီးသည် မှန်ကန်သောဘက်မှ ရပ်တည်ကာ ရှေ့နေတစ်ဦးလို ပညာရေးစနစ် ကို အပြစ်မှကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်အောင် စီရင်ထုံးနှင့်အညီ သင်ကြားနေသလား…စုမသိတော့ပါ။
ကျောက်ကြီးသည် ပညာရေးတက္ကသိုလ်တက်မည်၊ ကျောင်းဆရာလုပ်မည်တကဲကဲလုပ်သော်လည်း ဒ.လ.မ တက်၍ ယခုအခါဒုတိယမြို့တော်တွင် ဗိုလ်ဖြစ်နေပြီ။ ပညာရေးဘွဲ့ကို ကိုယ်တိုင်မယူခဲ့သော်လည်း B.ed ဘွဲ့ ရဆရာမကိုတော့ ရအောင်ဆွတ်ခူးထားသည်။ ဒီအချိန်ဆို ရဲစခန်းတွင် သူသည် ကျောင်းဆရာစိတ်ရင်း လေသံ ဟန်ပန်နှင့် သမာသမတ်ကျကျ ပြည်သူတွေကို ကူညီနေမည်လား…ဒါမှမဟုတ်……စုမသိတော့ပါ။
စုကတော့ မေမေ့အိမ်ကို ရောက်လို့ ဓာတ်စက်ကလေး ဖွင့်နားထောင်တိုင်း ငယ်သူငယ်ချင်းများကို လွမ်းမိပါသေးသည်။
Posted by မောင်ဖြူ at 1:24 PM Links to this post0comments
ခရစ္စမတ်လက်ဆောင် အဖြစ် ရုရှားက ဟာသတွေကို You tube မှာတွေ့လို့ အမှတ်တယ လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရုရှားစကားကို နားမလည်းဘူးဆိုရင်တောင်မှ သူတို့ သရုပ်ဆောင်တာတွေကို ကြည့်ပြီး ရယ်မောနိုင်ကြပါစေ။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။
Posted by ဇနိ at 2:36 PM Links to this post0comments
Posted by မောင်ဖြူ at 12:47 AM Links to this post0comments
Posted by ဇနိ at 1:55 AM Links to this post 1 comments
အခု ဒီBlogက Contributor ၃ ယောက်ရဲ့ ပုံတွေကို တင်လိုက်ပါတယ်။
ဒီBlog က လာဖတ်တဲ့သူနည်းပါတယ်။
Contributors တွေပဲ အချင်းချင်း ဖတ်ရှုအားပေးကြ၊ comments တွေဆိုလည်း အချင်းချင်းရေးကြတာများပါတယ်။ ရှားရှားပါးပါးလာလည်ကြတဲ့ မိတ်တွေတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ဆိုပါရစေ။
- ဒီတော့ ဓာတ်ပုံ Sketchတွေ ဘာလို့တင်သလဲလို့ မေးစရာရှိလာပါတယ်။
" ရှားရှားပါးပါးလာလည်တဲ့သူတွေက ဒီပုံလေးတွေမြင်ပြီး အပြင်မှာတွေ့တယ်ဆိုရင် အိမ်ခေါ် ထမင်းလေးဘာလေးကျွေးချင်ရင် ကျွေးနိုင်အောင်လို့ပါ။ "
Blogကို လာရောက်လည်ပတ် ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by ဇနိ at 1:27 AM Links to this post3comments
သူတို့ နဲ့ ဒို့ အကြား
ညီမလေးရေ ငေးမနေပါနဲ့ ညီမလေးရေငေးမနေပါနဲ့ ကွယ်။
Posted by မောင်ဖြူ at 12:11 PM Links to this post0comments
Posted by ဇနိ at 6:59 PM Links to this post4comments
Posted by ဇနိ at 11:56 PM Links to this post4comments
Posted by ဇနိ at 8:59 PM Links to this post3comments
ပြင်ဦးလွင်မြို့ နာရီစင်အနီးမှ အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်သော ဆံသဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ဖြစ်သည်။
တစ်နေ့ ကန်တော်ကြီးအနီးနှင်းဆီမှခြံမှ အလုပ်သမားတစ်ဦး ဆံပင်ညှပ်ရန်ရောက်လာလေသည်။ ဆံပင်ညှပ်အပြီး နံရံတွင်ချိတ်ဆွဲထားသော ဈေးနှံးအတိုင်း ကျသင့်ငွေကို ထုတ်ပေးရာ ဆံပင်ညှပ်ဆရာက “ နောင်ကြီးပိုက်ဆံကို ပြန်ယူသွားပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်က ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ပထမဆုံးလာတဲ့ ဖေါက်သည် ၁၂ ယောက်တိတိကို မေတ္တာနဲ့ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်ခင်ဗျာ” ဟုပြန်ပြောပြီး ပိုက်ဆံကိုပြန်ပေးလိုက်လေသည်။
ခြံလုပ်သားလည်း လေတစ်ချက်ချွန်လိုက်ပြီး ၀မ်းသာသောမျက်နှာနှင့် ပိုက်ဆံကိုပြန်ယူကာ ဆိုင်ထဲမှထွက်သွားလေသည်။
နောက်တစ်နေ့မနက် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကိုဖွင့်ရန် ဆိုင်ဝန်ထမ်းများရောက်လာချိန်တွင် ဆိုင်ရှေ့တံခါးဝ၌ အလွန်လှပသော နှင်းဆီပွင့် ၁၂ ပွင့်ပါ ပန်းစည်းကြီးနှင့် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ကဒ်ပြားတစ်ခုတွေ့ရလေသည်။
နောက်တစ်နေ့တွင် ဈေးထဲမှဘရာကြော်ရောင်းသော ကုလားကြီးတစ်ယောက် ထိုဆံပင်ညှပ်ဆိုင်သို့ရောက်လာလေသည်။ ဆံသဆရာသည် ကုလားကြီးအား ဆံပင်ညှပ်ပေးယုံတင်မက မညီမညာဖြစ်နေသော မုတ်ဆိတ်ပါအဆစ် ပုံဖော်ပေးလိုက်လေသည်။ ကုလားကြီးက ကျသင့်ငွေထုတ်ပေးရာ ဆံသဆရာက “ မာမူကြီး၊ ဆံပင်ညှပ်ခမယူပါရစေနဲ့။ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်က ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ပထမဆုံးလာတဲ့ ဖေါက်သည် ၁၂ ယောက်တိတိကို မေတ္တာနဲ့ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်ခင်ဗျာ” ဟုရှေးနည်းအတိုင်းငြင်းဆန်ပြီး ကုလားကြီးအား ပိုက်ဆံကိုပြန်ပေးလိုက်လေသည်။
ကုလားကြီးလည်း ခေါင်းတခါခါနှင့် ၀မ်းသာစွာ ထိုင်ထဲမှထွက်သွားလေတော့သည်။ နောက်နေ့မနက် ဆိုင်ဖွင့်ချိန်တွင် ဆိုင်ရှေ့တံခါးဝ၌ ဆီဝနေသော စက္ကူအထုပ်ကြီးတစ်ခု စောင့်ကြိုနေသည်ကို ဆိုင်ဝန်ထမ်းများ တွေ့ရလေသည်။ အထုပ်ကြီးကိုဖြေကြည့်ရာ ဘရာကြော်ကွင်းကြီး ၁၂ ခုနှင့်အတူ ပူစီနာ၊ ကြက်သွန်ဖြူနီ၊ မဆလာနံ့သင်းနေသော မန်ကျီးသီး အချဉ်နှစ်တစ်ထုပ်တွေ့ရလေသည်။
တတိယမြောက်ဆိုင်ဖွင်သောနေ့။ ထိုနေ့သည် ဗိုလ်လောင်းတို့ အောက်ပတ်(စ) ထွက်သော စနေနေ့ဖြစ်သည်။ ဆိုင်သို့ ဆံပင်ညှပ်ရန် ဗိုလ်လောင်းတစ်ယောက်ရောက်လာလေသည်။ ဆံသဆရာသည် ဆံပင်ညှပ်ပေးအပြီး “ ညီလေး၊ အစ်ကိုတို့ဆိုင်က ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ပထမဆုံးလာတဲ့ ဖေါက်သည် ၁၂ ယောက်တိတိကို မေတ္တာနဲ့ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ ပိုက်ဆံပေးစရာ မလိုပါဘူး” ဟု ထုံးစံအတိုင်း ပြောလိုက်လေသည်။
ဗိုလ်လောင်းလည်း ယူနီဖောင်းကို ဆန့်ရန့်အောင်ပြန်ပြင်၍ စမတ်ကျစွာဆိုင်ထဲမှ ထွက်ခွာသွားလေသည်။ နောက်နေ့မနက် ဆိုင်ဖွင့်ချိန်တွင် ဆိုင်ရှေ့၌ ၀န်ထမ်းများအား မည်သည့်အရာ စောင့်ကြိုနေမည် သင်ထင်ပါသလဲ။
ဆိုင်ရှေ့လှေခါးထစ်တွင် ဗိုလ်လောင်း ၁၂ ယောက် ဆံပင် အခမဲ့ညှပ်ရန် စောင့်ကြိုနေကြလေသည်။
Posted by ပီဆာကျယ် at 6:48 AM Links to this post3comments
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ယောရှိရော့မောရိအား အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ၀ါရှင်တန်မြို့ရှိ ဂျပန်သံရုံးတွင် အမေရိကန်သမ္မတကြီး ဘီ(လ်)ကလင်တန် လာရောက်တွေ့ဆုံရန်ရှိရာ အင်္ဂလိပ်စကား လုံးဝမပြောတတ်သော ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်အား အခြေခံအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း ပို့ချရလေသည်။
အင်္ဂလိပ်စာဆရာ။ ။ ၀န်ကြီးချုပ်ခင်ဗျား အမေရိကန်သမ္မတကြီးနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါ "How are you?" (ကျန်းဂန်သာလို့ မာပါစွ မိတ်ဆွေ) လို့ပြောပါခင်ဗျာ။
သမ္မတကလင်တန်က "I'm fine, and you?" (ကျန်းမာပါတယ်၊ သင်ရော) လို့ပြန်ဖြေတဲ့အခါ ၀န်ကြီးချုပ်ကြီးက "Me too " (ဒီကလည်း မိတ်ဆွေကြီးလိုပါပဲ) လို့ ပြန်ပြောဖို့ လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဒီနောက်မှာတော့ ၀န်ကြီးချုပ်ကြီးပြောလိုရာကို ဂျပန်လိုပဲ ပြောနိုင်ပါပြီ။ လူကြီးမင်း ပြောသမျှကို ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်များက အမေရိကန်သမ္မတကြီးအား အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ဆိုပေးပါ့မယ်။
၀န်ကြီးချုပ် ။ ။ အင်း ... ဒီလိုဆိုတော့လည်း အင်္ဂလိပ်စာက လွယ်သားပဲ။
ဘီ(လ်)ကလင်တန်ဂျပန်သံရုံးရောက်လာတဲ့အခါ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မောရိက "How are you?" လို့မေးရမဲ့အစား မှားပြီး "Who are you?" (မင်းဘယ်သူလဲ)လို့ မေးချလိုက်ရာ အမေရိကန်သမ္မတကြီး ကြောင်အန်းအန်းဖြစ်သွားရလေသည်။
ချက်ချင်းဆိုသလို ကလင်တန်သည် အခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းသည့် အနေဖြင့် ဟာသစွက်ကာ
(ကျုပ်လား၊ ဟယ်လာရီရဲ့ ယောင်္ကျားလေဗျာ၊ ဟား....ဟား) လို့ပြန်ပြောလိုက်လေသည်။
ဒီတော့မောင်မင်းကြီးသား ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးက ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ သူပူပူနွေးနွေး သင်ယူတတ်မြောက်ထားတဲ့အတိုင်း
"Me too, ha ha...." (ဒီကလည်း မိတ်ဆွေကြီးလိုပါပဲ၊ ဟဲ...ဟဲ) လို့ ပြန်ပြောလိုက်လေရာ အမေရိကန်သမ္မတကြီး ကလင်တန့်မျက်နှာကြီး ချယ်ရီသီးမှည့်ကြီးလို ညိုပုတ်သွားရလေသည်။
Posted by ပီဆာကျယ် at 7:32 AM Links to this post 1 comments
Posted by မောင်ဖြူ at 9:07 PM Links to this post 1 comments
Posted by မောင်ဖြူ at 11:31 PM Links to this post0comments
အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို အသုံးပြုပြီးလျှင် ဘယ်နေရာကိုထားရှိမိမှန်းမသိသဖြင့် မိမိ၏မှတ်ဥာဏ် ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်လို့ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရန် ဆေးခန်းသို့သွားလေ၏။
အမျိုးသမီး။ ။ ဒေါက်တာ ကျွန်မမှာ မှတ်ဥာဏ်နှင့်ပတ်သက်လို့ အခက်အခဲရှိနေပါတယ်။ ဥပမာ ဒေါက်တာရယ်… ကျွန်မ ကားယူလာတဲ့အခါ ကားကိုတစ်နေရာရာမှာရပ်ထားခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်မ ကားကိုပြန်ရှာတော့ ဘယ်ကားဟာ ကျွန်မရဲ့ကားဆိုတာ မမှတ်မိဘူး။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်မ မျက်မှန်ကို တစ်နေရာရာမှာထားပြီးရင် ဘယ်နေရာမှာထားမိမှန်း မမှတ်မိလို့ ရှာမတွေ့ဘူး။ နောက်တစ်မျိုးက ကျွန်မရဲ့ကလေးကို တစ်နေရာရာမှာ ထားခဲ့တယ်… နောက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ ပြန်ရှာတော့ ဘယ်နေရာမှာ ထားခဲ့မိမှန်း မသိတော့ဘူး။
ဒေါက်တာ။ ။ အင်း… ရှင်ရဲ့ရောဂါက တော်တော်ဆိုးနေပြီပဲ။ ဒီသုံးမျိုးတည်းပဲလား… နောက်ထပ်ပြဿနာတွေရှိရင်ပြောပအုံး… မှတ်ဥာဏ်မကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့။
အမျိုးသမီး။ ။ မှတ်ဥာဏ်မကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာ… ဟုတ်လားဒေါက်တာ… ကျွန်မ စောစာက ဘယ်လိုပြဿနာတွေကို ပြောခဲ့မိလို့လဲ ဒေါက်တာ။
Posted by tmn at 2:52 PM Links to this post 1 comments
Posted by tmn at 2:53 PM Links to this post4comments
အိုင်တီခေတ်ကြီးမှာ အရှိန်အဟုန်နှင့် တိုးပြီးရင်းတိုးတက်လို့သာ လာနေချေပြီ။ (ကုန်ဈေးနှုန်းနှင့်အတူ တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေခြင်းမှာတော့ ဖန်ဆင်းရှင်၏ ကျီစယ်မှုလေလားမပြောတတ်) အိုင်တီနည်းပညာတိုးတက်မှု၏ အဓိကအခန်းတွင် မဖြစ်မနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေသူတစ်ယောက်မှာ အင်တာနက်ဖြစ်သည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏အစွမ်းပကားဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် ခြေစင်္ကြာဆန့်လို့ရပြီ။ GoogleEarth လိုအရာမျိုးဖြင့် ရွာမှာနေသော ဆွေမျိုးတွေ၏ နွားတင်းကုတ်ကိုပင် အလွမ်းပြေကြည့်လို့ရနေပြီ်။ အမေရိကားလိုနိုင်ငံမျိုးကိုတော့ maps.google.com မှ အပြင်မှာမြင်နေရသည့်အတိုင်း ကြည့်လို့ရနေချေပြီ။ ကျွန်တော်တို့မှာလည်း ထိုထိုသော ထူးဆန်းထွေလာ နည်းပညာခေတ်ကြီးတွင် မွေးဖွားကြီးပြင်းလာကြသူများနည်းတူ၊ ငါတို့လဲ တစ်ခန်းတစ်နေရာကတော့ ပါဝင်ကြမယ်ဟဲ့လို့ ကြွေးကြော်ကာ အင်တာနက်ဆိုတာကြီးကို လှန်လိုကလှန်၊ မှောက်လိုကမှောက်ဖြင့် သုံးစွဲနှိပ်စက်ကလူ ပြုမူနေကြသည်မှာ နှစ်အတော်ကြာပင် ခရီးပေါက်ခဲ့လေပြီ။ မကြာသေးမီခေတ်များကတော့ နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းတစ်ပါးသို့ အလုပ်အကိုင်ကိစ္စဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပညာရှာမှီးရန်အတွက်လည်းကောင်း ထွက်ခွာလာရသူများမှာ၊ အဆိုတော် ဒေါ်နွဲ့ယဉ်ဝင်း၏ “ရွှေပင်လယ်ကြီး ကာဆီးထားလို့ ဆုံဆည်းရဖို့ ဘယ်လောက်ထိစောင့်ရမယ်မသိဘူး” ဆိုသော သီချင်းစာသားလေးအတိုင်း ပြန်မလာခင်အချိန်အထိ ချစ်သူမျက်နှာတွေ့ဖို့မလွယ်တော့။ အသံလေးကိုပင် တစ်လမှ နာရီဝက်လောက် ကြားခွင့်ရနိုင်မည်။ (ဒါတောင် ထိုခေတ်ထိုအခါက ဖုန်းဘိုးမှာ နည်းမည်မဟုတ်) ရုပ်ဆိုရင်တော့ ဝေလာဝေး။ တချို့ချစ်သူရည်းစားတွေကတော့ ဓါတ်ပုံလေးတွေရိုက်ပို့ရသည်။ စာပို့ရတာလည်း သိပ်တော့မလွယ်လှ။ ဆယ်စောင်ပို့လျင် ငါးစောင်ခြောက်စောင်ရောက်ဖို့ပင် သိပ်မသေချာလှပေ။
ယခုတော့ ဒီလိုမဟုတ်တော့။ ပင်လယ်ကြီးကာဆီးထားလဲ ဂရုမစိုက်၊ သမုဒ္ဒရာကြီးဆီးတားထားလဲ စိတ်ပူစရာမလိုတော့။ ကမ္ဘာဆိုတာ ရွာကြီးတစ်ရွာလိုပင် ဖြစ်နေချေပြီဟု၊ ပညာရှင်တို့ ခေါ်ဝေါ်သမုတ်နေကြလေပြီ။ မြန်မာပြည်မှ စင်္ကာပူသို့ ကျောင်းသွားတက်သည်ဆိုလျင်ပင်၊ ရွာတောင်ပိုင်းမှ ရွာမြောက်ပိုင်းသို့ မန်ကျည်းရွက်သွားခူးသလို ဖြစ်နေသည်။ ချစ်သူရည်းစားဆိုလျင်လည်း၊ online မှာ အချိန်ပြည့်တွေ့လို့ရသည်။ ရွာမှာကောက်စိုက်သည့်လက်များသည်၊ ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ တဖြောင်းဖြောင်း။ ရွာထိပ်က မန်ကျည်းပင်ရိပ်အောက်မှ အတင်းပြောသံများသည်၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှာတညံညံ။ စာပို့လျင်လည်း ယခင့်ယခင်ခေတ်များကလို တစ်လကိုးသီတင်းစောင့်ဖို့မလို။ ကလစ်ဆိုတာနှင့် ရောက်သွားချေပြီ။ (တစ်ခါတလေ ကလစ်တာမှားပြီးပင် ရောက်တတ်သေးသည်)။ အသံလေးကြားဖို့ဆိုတာလဲ မခဲယဉ်းတော့။ (ခဲယဉ်းအောင်လုပ်ထားသော အချို့အချက်အလက်များကိုတော့ သည်းခံစိတ်ဖြင့်သာ မသိကျိုးကျွံပြုကြကုန်လော့) ဂျီတော့၊ ဒီတော့စသည်ဖြင့် တော့တွေက စုံလင်လှသည်။ ဒီတော့ဖြင့်အဆင်မပြေလျင် ဟိုတော့ကို ပြောင်းလို့ရသည်။ ဟိုတော့ကို ဟိုလိုလုပ်ထား၍ တော့မရလျင်၊ ဟိုလိုကျော်၍တော့ရပြန်သည်။ ဘယ်လိုပင်ဆိုစေကာမူ၊ တော့လို့ရနေတာတော့အမှန်ပင်။ တချို့က တစ်နေကုန်တော့သည်။ တချို့က အခန်းဖော်ကျောင်းသွားတုန်းတော့သည်။ တချို့က အလုပ်အားချိန်၊ ကျောင်းအားချိန်မှာတော့သည်။ တော့ရတာအားမရသူများကတော့ အလုပ်ဖျက်၊ ကျောင်းလစ်၍ပင် တော့နေကြလေပြီ။ တော့ကမ္ဘာကြီးသည်လဲ တော့သံများဖြင့် ဖုံးလွှမ်း၍နေလေပြီ။
လူ့လောဘဆိုတာလဲ အခက်သား၊ ဘယ်တော့မှ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်နိုင်မှုမရှိကြ။ အသံလေးကြားရယုံနှင့် မကျေနပ်နိုင်။ သောတအာရုံခံစားမှုဖြင့် မတင်းတိမ်နိုင်ကြတော့။ စက္ခုအာရုံလေးလဲ ခံစားချင်လာကြသည်။ လူသားတို့၏လိုအပ်ချက်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြည့်စွမ်းပေးရင် သတ္တလောကကြီးကို အကျိုးပြုနေကြသော ပညာရှင်များမှာ ဒီတိုင်းထိုင်နေလို့မဖြစ်တော့။ ရုပ်ပါမြင်ရသော “ဝက်ကန်” ဆိုတာလေးတွေတီထွင်လာကြသည်။ အသုံးပြုသူမောင်မင်းကြီးသား၊ မယ်မင်းကြီးသားတို့မှာလည်း၊ ရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲပြုတ်ကျ ဆိုသည့်နည်းတူ၊ အလုအယက်ဝယ်ယူသုံးစွဲကြလေပြီ။ ဗွီဇက်အို၊ ဒီဇက်အိုစသည်ဖြင့် အိုပေါင်းများစွာကလည်း၊ လူသားတို့၏လိုအပ်ချက်အလျောက် ပေါ်ပေါက်လာကြပြန်လေသည်။ ဤသို့ဖြင့် အိုင်တီခေတ်ကြီးတွင် အိုင်တီလူသားတို့မှာ တော့လိုက်၊ ကန်လိုက်ဖြင့်၊ တော့ကန်သဘောတရားထဲတွင် စီးမျောရင်း နည်းပညာ၏အသီးအပွင့်များကို မြိန်ယှက်စွာ ဆွတ်ယူစားသုံးလျက် နေကြလေပြီ။
သို့သော် တော့လိုက်၊ ကန်လိုက်ဘဝကို ရောင့်ရဲတင်းတိမ်နေကြလေပြီလောဆိုသော်၊ ထိုသို့မဟုတ်။ ပညာရှင်များကလဲ တချိန်ချိန်မှာ လိုအပ်လာမည့် အိုင်တီလူသားတို့၏ တောင့်တမှုများကို ကြိုတင်တွေးခေါ်ကြံစလာကြလေချေပြီ။ ယခုလည်း တော့ကန်ဖြင့်သာ မရောင့်ရဲနိုင်သူတို့အဖို့ ပညာရှင်တို့ တီထွင်လိုက်သည်မှာ ဂန္ဓာရုံကိုပေးစွမ်းနိုင်သော ကိရိယာလေးပင်။ ထိုကိရိယာလေးကို ကွန်ပြူတာနောက်ဖက်ပေါက်မှတပ်ဆင်လိုက်လျင် ကြိုးလေးတန်းလန်းနှင့် ကြိုးအဆုံးတွင် သံဇကာကွက်လေးတွေနှင့်ယက်ထားသော အဝအနည်းငယ်ကျယ်သည့် smelling sensor လေးကိုတွေ့ရမည်။ ထို sensor လေးနားတွင် အသုံးပြုသူ၏ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို ကပ်လိုက်လျင်၊ ထိုခန္ဓာကိုယ်မှ အနံ့အသက်လေးမှာ sensor မှတစ်ဆင့် အသုံးပြုသူ၏ကွန်ပြူတာ၊ ထိုမှတစ်ဆင့် တစ်ဖက်လူ၏ receiver ထဲသို့တိုက်ရိုက်ရောက်သွားသည်။ receiver ၏ ကြိုးအဆုံးတွင် နှာခေါင်းနှင့်ဆင်တူသော အပေါက်နှစ်ပေါက်ပါသည့်ကိရိယာလေးရှိသည်။ အသုံးပြုသူက ထိုအရာလေးကို မိမိနှာခေါင်းတွင် တပ်ဆင်လိုက်လျင်၊ တစ်ဖက်လူ၏အနံ့ကို တိုက်ရိုက်ခံစားရပေလိမ့်မည်။ အသုံးပြုနေချိန်အတွင်းတွင်၊ နှာရှူဆေးဗူးမရှူရ၊ ဆေးလိပ်မသောက်ရ၊ ငပိတွေဘာတွေလဲမကြော်ရ။ ငပိချက်လိုမျိုးနှင့်ထမင်းစားထားလျင်လဲ၊ လက်တို့၊ ပါးစပ်တို့ကို စင်ကြယ်အောင်ဆေးပြီးမှ အသုံးပြုသင့်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက၊ အနံ့ခံအာရုံမှားယွင်းမှုများနှင့် ကြုံတွေ့ကာ တစ်ဖက်လူ၏နှာခေါင်းကို ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် အသုံးပြုသူ မောင်မင်းကြီးသား၊ မယ်မင်းကြီးသားတို့မှာ၊ အသံလေးကြားရဖို့နှင့် ကိုယ်ကပြန်ပြောဖို့ headset လေးကို ခေါင်းမှာတပ်ထားရမည်။ screen ပေါ်မှာက “ဝက်ကန်” လေး ကန်ထားမည်။ smelling sensor ကို ခန္ဓာကိုယ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုတွင် ကပ်ထားမည်၊ receiver ကို နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်တွင် တပ်ဆင်ထားမည်ဆိုပါက၊ တော့ကန်နမ်းလေးလုပ်လို့ရပေပြီ။
တီထွင်သူရှိတော့လဲ အသုံးပြုသူရှိပေမပေါ့။ မကြာသေးမီရက်တစ်ရက်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏မွေးနေ့။ မွေးနေ့ဆိုတော့လည်း ချစ်သူရည်းစားကို တော့ကန်လေးလုပ်ချင်သည်။ ကျွန်တော်က တော့ကန်လောက်တော့လုပ်မနေနဲ့၊ ဟိုကိရိယာလေးပါထည့်လိုက်ပေါ့ကွာ၊ တော့ကန်နမ်းလေးလုပ်လို့ရတာပေါ့ ဆိုတော့၊ သူသဘောခွေ့ကာ နမ်းကိရိယာလေးကိုပါ တပ်ဆင်လိုက်သည်။ “ဝက်ကန်“မှာ ကောင်းကောင်း ကန်နိုင်အောင် အပြတ်ဖီးလိမ်းသည်။ အဆင်ပြေမပြေ “ဝက်ကန်”မှာ ကိုယ့်ရုပ်ကို ပြန်ကြည့်လိုက်သေးသည်။ သေချာပြီဆိုတော့မှ အသံစမ်းသည်။ ချောင်းလေးတစ်ချက်နှစ်ချက်ဟန့်လိုက်တော့ အသံက ဘောက်ကထွက်လာသည်။ ထိုအခါကျမှ ဘောက်ကိုဖြုတ်ပြီး headset တပ်ဖို့သတိရသည်။ အားလုံးအိုကေပြီလား၊ မဟုတ်သေး။ ဒီနေ့ကထူးခြားသည်။ smelling sensor လေးပါတပ်ထားတာဆိုတော့၊ အမွှေးအကြိုင်လေးကလဲ လိုသေးသည်။ ရှိသမျှရေမွှေးတွေအကုန်ဆွတ်သည်။ အော်ဒီကလုံး၊ ဒေါ်ကြည်ကလုံးစသည်ဖြင့် ကလုံးတွေစုံလင်လှသည်။ နောက်ဆုံးအားမရသဖြင့်၊ air fresher ဗူးလေးနှင့်ပင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး တရှူးရှူးဖြန်းလိုက်သေးသည်။ အဆင်ပြေပြီဆိုမှ ချစ်သူနှင့် တော့ကန်နမ်း ဇာတ်လမ်းစတော့သည်။ အစကတော့ အဆင်ပြေလို့။ ဒီဖက်ကလည်း တရှူးရှူး၊ ဟိုဖက်ကလည်း တရှူးရှူးနှင့် ချစ်လိုက်ကြတာ၊ ပညာရှင်များကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ပင်မေ့နေမိသည်။ သိပ်မကြာလိုက်ပါ၊ ဟိုဖက်ကရည်းစားက အပြတ်ကောတော့သည်။ “ရှင်က ချစ်သူနဲ့စကားပြောနေတာတောင်၊ ထိန်းမထားနိုင်ဘူးလား၊ ထိန်းမထားနိုင်ရင်လဲ အပြင်လေးခဏထွက်ပြီး ကိစ္စရှင်းပါလား“ စသည်ဖြင့် ပြသနာရှာတော့သည်။ သကောင့်သားမှာ မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်နှင့်၊ သူလဲဘာမှမလုပ်လိုက်ရ။ လေလည်ရအောင်လဲ၊ အဲလိုမျိုးဖြစ်မှာစိုးလို့ကို၊ စောစောစီးစီးတည်းက ရှင်းထားပြီးသား။ နောက်ဆုံးတော့ တရားခံပေါ်သွားသည်။ အခြားလူမဟုတ်၊ အိုင်တီခေတ်၏ မာန်နတ်မင်းသားကြီး ကိုကိုhacker ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းက ပေါ်ကာစဆိုတော့၊ ပညာရှင်များက လုံခြုံမှုကိစ္စကို သေချာမစဉ်းစားရသေး။ ဈေးကွက်ကလဲ တောင်းဆိုနေ၊ ထုတ်လုပ်သူကလဲလောနေသဖြင့်၊ အမြန်ထုတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ hacker များက ထိုအခွင့်အရေးကို ကောင်းစွာအသုံးချလျက်၊ အနံ့ခံ code များကို ဝင် change သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားပွင့်တာတောင်၊ မာန်နတ်ကနှောက်ယှက်လေ့ရှိရာ၊ အကောင်းရှိလျင် အဆိုးရှိတတ်သည်မှာ လောက၏ နိယာမသဘောတရားတစ်ခုလေလောဟု ထင်မိလေမည်လား မပြောတတ်တော့ပါ။ ။
မောင်ဖြူ (2:20pm, 04.12.2007)
Posted by မောင်ဖြူ at 4:41 PM Links to this post6comments
ဒင်းကလေးကိုလေ……ကျုပ်ကရင်ဘတ်ကြီးထဲမှာသိမ်းထားချင်တဲ့ကောင်ပါဗျ။ လောကကြီးကမာယာများတယ်လောကကြီးနဲ့ မပတ်သက်အောင် ဒင်းကလေးကို ကာကွယ်ပေးချင်တဲ့သူ။ ဒါကိုအလိုက်ကမ်းဆိုးမသိ ဒင်းကလေးက ကြွေရမှာကိုကြောက်ပေမဲ့ တစ်ဘ၀မှတစ်ခါတော့ ဝေပါရစေနော်တဲ့ ဘယ်ကညဉ်ဆိုးတွေရလာတယ်မသိဘူး။ ခဏခဏတောင်းဆိုနေတော့လဲ ကျုပ်ကချစ်တဲ့ကောင်လေ၊ ခွင့်မပြုပဲနေနိုင်ပါ့မလား။ ဟော ခွင့်လဲပြုလိုက်ရော ဒင်းကလေးက မာနတွေနဲ့ လှလှပပကြီးကို ပျော်နေတော့တာ ဗျို့။ ကျုပ်လဲသူ့အပျော်တွေကူးစက်ခံရပြီး ကိုယ်ကိုကိုယ်မေ့နေမိတယ်။ ခုနက MP3နဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ “လေယူနှင်လာ ကြွေကာဝဲကာဆင်း ရွှေမှုံရောရာမြေသို့သက်လျော လွမ်းဘွယ်သာမောစွာ”ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ ကျုပ်ခြေရင်းမှာလာထိုင်တယ်။ ရီဝေေ၀သူ့မျက်လုံးတွေက ၀ါဖျော့နွမ်းနေတဲ့ ဒင်းကလေးကိုကြည့်လို့။ အဲဒီတော့မှ ဒင်းကလေး ကျုပ်ကိုစွန့်ခွာသွားပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ MP3နဲ့လူရေ တစ်ကယ်ရင်နာဖို့ကောင်းတာက ကျုပ်ပါဗျ။ မခေါ်ဘဲလာ မနှင်ဘဲပြေးတဲ့ ဒင်းကလေးအကြောင်း ခင်ဗျားကောင်းကောင်းမသိသေးလို့နော်။
နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတာ ကျွန်မသိပါတယ်။ ရှိသမျှအင်အားတွေကို ဖမ်းဆုပ်ယူပြီး ကျွန်မခိကိုကြည့်လိုက်တယ်။ ” ဒီမယ်ခိ (ကျွန်မကသူ့ကိုဂျပန်လိုချစ်စနိုးခေါ်တယ်) ရှင်ဟာသိသိရက်နဲ့ ကျွန်မကိုခွန်အားတွေဖြတ်တောက်ပစ်ခဲ့တာ၊ ရှင့်အနားကထွက်ခွာသွားစေချင်လို့မဟုတ်လား။ ရှင်ဟာအသစ်အသစ်တွေနဲ့ မကြာခင်ပျော်နေတော့မှာလို့ ကျွန်မခန့်မှန်းလို့ရတယ်” လို့ပြောပစ်လိုက်တယ်။ ခိကမကြားချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။ ကျွန်မအနားမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ကဗျာရေးနေတယ်။
ကျွန်မအဲဒီထိပဲဖတ်နိုင်တော့တယ်။ သူ့ရဲ့အထီးကျန်ဘ၀ကို ခိနဲ့နှိုင်းပြီးမျက်ရေကျနေတယ်။မငိုပါနဲ့ကွယ်။ ကောင်မလေးရေ ရွက်ကြွေလေးရဲ့ခွဲခွာခြင်းကသာ ထာဝရခွဲခွာခြင်းပါ။ ခိဟာ စိမ်းစိုနုသစ်တဲ့အချစ်တွေနဲ့ မကြာခင်မှာ ပြန်လည်နိုးထ အသက်ဝင်လာဦးမှာပါ။ မင်းလည်းပဲလေ…..ပြောရင်းနဲ့ ကြွေဟာခိအနားမှာပဲ….သူ့ကိုယ်သူတစ်စစီ သဂြိုဟ်ပစ်လိုက်တယ်။ ။
Posted by မောင်ဖြူ at 3:58 PM Links to this post0comments
နှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ရွေးယူလိုက်ရတာ
ရတဲ့နေ့ ကစလို့ 
ပြန်တွေ့ မယ် “” ဧရာဝတီ “” မှာလေ။
Posted by မောင်ဖြူ at 3:56 PM Links to this post 1 comments
ရုရှားသီချင်းပါ။ အဆိုတော်နာမည်ကတော့ ဇဗျဲရီပါ။ နာမည်ကျော်တစ်ယောက်ပါပဲ။
ကျနော်ကတော့ နားထောင်ရတာ အတော်ကိုကြိုက်ပါတယ်။
ဘောလုံးလေး ရေထဲမှာ နှစ်မြုတ်မသွားဘူး။
အံ့သြစရာကောင်းတာကလွဲပြီး ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ ပိုမရှိပါဘူး။
ဒေါက် .... ဒေါက်
နှုတ်ခမ်းတွေက နှုတ်ခမ်းတွေကိုလွမ်းလို့ အရည်ပျော်ကျ
ဂျောက်ကနဲ မီးခြစ်ခြစ်သံ - မိုးသေနတ်တွေပေါ့။
မင်းနဲ့ငါလည်း ပူဆွေးနေလို့ မဖြစ်သေးပါဘူး
မင်းမရှိဘဲ နွေရာသီကို နှုတ်ဆက်ရဦးမယ်
Posted by ဇနိ at 3:33 PM Links to this post0comments
ဆောင်းဦးပေါက်အသွေးစုံအရောင်များကို ခံစားခြင်း (၂)
ကမကုရဘုရားကို ရောက်သွားတော့ ဆောင်းဦးပေါက် အရောင်အကြောင်းကို ရေးပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် ထပ်ပြီးရေးချင်စိတ်တွေ၊ ဝေမျှချင်တဲ့စိတ်တွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ အနီရောင်မေပယ်(လ်)ပင်တွေအပြင်၊ Ginkgo-ပင်တွေကလည်း အ၀ါရောင်တွေ ပြောင်းပြီးတော့ ဆောင်းဦးပေါက်ကို အလှတစ်မျိုးဆင်ထားပြန်တယ်။ ပထမဆုံးကျောင်းထဲကိုသွားတော့ အ၀ါရောင်လမ်းတွေအပေါ်မှာ လျှောက်ခဲ့ရတယ်။ ခြေထောက်နဲ့မြေကြီး တကယ့်ကို မထိခဲ့ဘူး။ အ၀ါရောင်လမ်းလေးအပေါ်မှာ အလွမ်းစိတ်တွေနဲ့အတူ အချိန်အကြာကြီးမျောပါခဲ့ရတယ်။ ဘယ်ဆီကို လွမ်းမှန်းတော့မသိဘူး။ လွမ်းလို့တော့ အရသာက အရှိသား။ အလွမ်းဓာတ်ခံရှိ၊ မရှိကတော့ အဓိကဟုတ်မယ် မထင်ဘူး။ ပိုကဲလှတဲ့ ဆောင်းဦးပေါက်သဘာဝတရားက ဆွဲဆောင်သွားတာဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိတယ်။ အ၀ါရောင်လမ်းကလေးက လွန်လာတဲ့အခါမှာ မေပယ်(လ်)နီနီတွေကိုလည်း သံယောဇဉ်မပြတ်တော့ တစ်ချက်ကြည့်မိတယ်။
ကမကုရဘုရားကို ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်း အ၀ါရောင်၊ အနီရောင်အရွက်စုံ၊ အရောင်စုံကြားမှာ ကြည်ညိုစရာကောင်းလှတဲ့ ရုပ်ထုတော်ကို ဖူးတွေ့ရပြန်ပါတယ်။
ကမကုရဘုရားကိုဖူးမြော်ရင် ဂျပန်ကိုလာရတတ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ ဂျပန်ကို အရောက်လာချင်ကြရင်တော့ ဒီကဝေမျှထားတဲ့ဓာတ်ပုံကို ဖူးမျှော်ကြပါလို့။
Posted by ဇနိ at 4:45 PM Links to this post0comments
Posted by ဇနိ at 3:31 PM Links to this post 1 comments